Soosaar mesh silig jumlo soo saare iyo Warshad | Huiling
Qalabka silig bir ah oo kaarboon hooseeya, silig galvanized ah, silig PVC oo dahaarka leh Qiimaha FOB Tianjin: $ 8.8-25.5usdd / set
Ballaca siligga 3.0mm-6mm
Mesh Size 50 × 100,50x200mm, 60x200mm, sidaad u codsatay
Dherer / Balac Dhererka 1.0-2.0m, Ballaca 1.5-2.5m
Daaweynta dusha sare Galvanized, PVC daahan
1) Meelaha xayndaabka lagu sameeyo oo lagu shubay shub shub ah, qiime jabanna leh.
2) Awood sare, xasillooni guud oo wanaagsan.
3) Midabka lakabka caaga ah ee dusha sare leh wuxuu leeyahay anti-daxalka iyo saameynta qurxinta.
4) Xayndaabka dayrka wuxuu leeyahay isafgarad iyo aragti wanaagsan.
Hore: Baqashada / baqashada baqashada
Xiga: Mesh mesh silig